बाग्मतीमा सत्ताको भागबण्डा मिल्योः अब समाजवादीका नेता पाण्डे मुख्यमन्त्री ! - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ राजनीति ∕ बाग्मतीमा सत्ताको भागबण्डा मिल्योः अब समाजवादीका नेता पाण्डे मुख्यमन्त्री !
Sindhu Khabar बिहीबार, २०७८ कात्तिक ४ / १६:३१
हेटौंडा, कार्तिक ४ । बागमती प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसबीच बाग्मतीमा आगामी कार्यकालमा आधा–आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति जुटेको हो ।
एमाले नेतृ तथा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि गठबन्धन बीच यस्तो सहमति भएको हो । मुख्यमन्त्री शाक्यले आज प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव माथि छलफल हुने पक्का भएपछि दुई दलले पुरै अवधीका लागि मुख्य मन्त्रीमा दावी गरिरहेका थिए ।
एउटा मात्र दलले मुख्यमन्त्री सम्हाल्दा केन्द्रको गठवन्धन सहकार्यमा पनि समस्या आउने भएपछि प्रदेश सभा बैठकमा शाक्यले विश्वासको मत सामना गर्नु केहि घण्टा अघि दुई दलका नेता बीच आधा आधा समय सत्ता बांडेर खाने सहमति भएको हो ।
गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्व तहमा भएको छलफल र सहमति अनुसार शाक्यले विश्वासको मत नपाए लगत्तै बन्ने नयां सरकारको नेतृत्व पाण्डेले गर्ने छन् । पहिलो आधा कार्यकाल एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले गरेपछि बांकी आधा काँग्रेसको इन्द्र बानियाँ सरकारको नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।
मुख्यमन्त्री शाक्यले २४ असोजमा प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । आज बस्ने गरी बैठक स्थगित भएपछि विश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको थिएन । यो बीचमा दुबै दलले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिरहेका थिए ।
शाक्य एमाले भित्रको संकट उत्कर्षमा पुगेको बेला, २ भदौमा एमालेको एकल बहुमतबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी हुन् । एमाले विभाजन भएर १३ सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि शाक्य अल्पमतमा परेकी हुन् ।
वाग्मति प्रदेश सभामा एक जना सांसदको निधन भएकाले ११० सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले १०९ जना सांसद छन् । बहुमतका लागि ५५ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
अहिले एमालेका ४३, कांग्रेसका २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का २३, एकीकृत समाजवादीका १३, विवेकशील साझाका तीन, नेमकिपाका दुई, राप्रपाका दुई र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
तत्कालीन नेकपा एमाले भित्रबाट माधव नेपालसमुहले विद्रोह गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले राजिनामा दिएर शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो । त्यसको दुइृ महिना मै पुनः माधव नेपाल समुहले बाग्मति प्रदेश सरकार परिवर्तन गराएर राजनितीक अस्थिरता मच्चाएको छ ।